Domain ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲ ? [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Network Engineering » Domain ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲ ? [Problem]
1 Domain ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲ ? [Problem] on 15th March 2011, 6:04 pm
ကျွန်တော့ဆီမှာ Window Server 2003 တင်ထားတဲ့စက်ရယ်..၊ Client ကွန်ပျူတာ2လုံးရှိပါတယ်။ တစ်လုံးက Window XP ပါ။ တစ်လုံးက Window7ultimate 32 bit တင်ထားပါတယ်။ ကလိုင်း၇န့် နှစ်လုံးကနေ Server ကို Domain ဘယ်လိုချိတ်၇လဲခင်ဗျာ။ မျှဝေပေးပါဥိးခင်ဗျာ။ မြန်မာလို အီးဘွတ်ရှိရင်လည်း link လေးညွှန်ပြပေးပါဥိးခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....။
2 Re: Domain ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲ ? [Problem] on 10th April 2011, 8:29 am
ကျနော် သိသလောက်ကတော့ အကို main domain တစ်ခုလိုိပါတယ် ပြီးတော့ main domain ကို client တစ်ခုထဲ့သာဆက်သွယ်လို့ ရပါတယ် client နှစ်ခုလုံးရဲ့main IP တူနေရင်တော့ နှစ်ခုလုံးကို main domain နဲ့ တွဲပြီးသုံးလို့ ရပါ.. ဒီလိုလုပ်ပါလား
Client 1 //ex. [You must be registered and logged in to see this link.]
Client2//ex. http//test.pyaysone.com (test နေရာမှာကြိုက်သလို့ ထည့်ပါ..)
နောက်ပြီးတော့ client တွေရဲ့IP နဲ့domain ကို ဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့ domain setting ထဲမှာ ပြင်လို့ ရပါတယ်. တစ်ခုရှိတာက ကျနော် သုံးနေကြနဲ့ သုံးဖူးတဲ့ hosting တွေကတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုမတူဘူး အဲ့ဒါကြောင့်အကို hosting ရဲ့အကြောင်းလေးတွေနည်းနည်းပြောပြလိုရမလား..
3 ဒီလိုချိတ်ကြည့်ပါလား on 18th April 2011, 2:24 pm
Windows Server 2003 တင်ထားတဲ့စက်ကို အရင်ဦးဆုံးDNS (Domain Name Server) ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရပါမယ်။
အခေါ်အဝေါ်အားဖြင့်တော့ DNS ထောင်တယ်လို့ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုထောင်ပြီးရင် ကိုယ် ချိတ်ချင်တဲံ Client စက်ကနေ
လှမ်းပြီးတော့ Work Group နေရာမှာ DNS နဲ့ ပြောင်းပြီးဝင်ရပါမယ်။ဒါက အကြမ်းဖျင်းပါ...
အသေးစိတ်ဆိုရင် DNS ထောင်ပြီးတာနဲ့ User Name တွေသတ်မှတ် Permission တွေသတ်မှတ်ပေးရပါမယ်
Admin ဆိုရင် ဘယ်လို Domain User ဆိုရင် ဘယ်လို ဆိုပြီး Permission တွေ သတ်မှတ်ပေးထားရပါမယ်.
ပြီးတော့မှ Client ကနေ လှမ်းပြီး ချိတ်လိုက်တာနဲ့ Damain Admin နဲ့ ချိန်ပေးပြီး ကိုယ်ထိန်းချုပ် သတ်မှတ်ချင်တာလေးတွေ
သတ်မှတ်ပြီးမှ User ကိုပေးသုံးတာပါ...
အခုပြောတဲ့ DNS ဆိုတာကို အထင်တော့မသေးလိုက်နဲ့နော်... Cooperate အဆင့်ကနေ Data Center အထိ သုံး
ဒီထက်အသေးစိတ်ဲ့ စာအုပ်တွေကို ကျွန်တော်ပြန်ရှာပြီးတင်ပေးပါအုံးမယ်...
DNS ထောင်ပြီးသွားမှသာ Web Server, Mail Server,Internet Security Server စတာတွေကို တိုးချဲ့ချိတ်ဆက်သုံးဆွဲ သွားလို့ရမှာပါ...။ နောက်ပြီး DNS ထောင်ထားပြီးတဲ့အဆင့်မှာတင်ပဲ Security ပိုင်းကို စမ်းသပ်ပြီး Hack ကြည့်
Crack ကြည့်ပါ.. ပျော်ရွှင်စရာတွေအများကြီး တွေ့ရမှာပါ...
(အင်း... ရေးတော့ရေးလိုက်ပြီ ဘာမှားနေလဲမသိဘူး)
4 Re: Domain ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲ ? [Problem] on 20th April 2011, 10:55 pm
winဆာဗာ ရဲ့ip က 192.168.1.1 (ဥပမာ) ကို [You must be registered and logged in to see this link.] ဖြစ်အောင် လုပ်ရတာလားခင်ဗျာ
win ရိုးရိုး ကနေလဲ [You must be registered and logged in to see this link.] ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ ရတယ်လို့ပြောကြပါတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရ
5 Re: Domain ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲ ? [Problem] on 20th April 2011, 11:03 pm
6 Re: Domain ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲ ? [Problem] on 23rd April 2011, 1:05 pm
နောက်ပြီး ကိုယ့်ဆရာက Domain ချိတ်မယ်ဆိုပြီးမေးထားတာက Web Server ဖြစ်နေတယ်ဗျ...
တော်ကြာ အဖြေမှားလို့ သူများတွေဝိုင်းတုတ်နေမှာကြောက်တယ်....
7 Re: Domain ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲ ? [Problem] on 23rd April 2011, 1:47 pm
ကျွန်တော့ရုံးက ACE Software သုံးပါတယ်။ သူတို့က Win 2003 မှာ Domain ထိုင်ပေးထားပါတယ်။ ဆာဗာကနေ ကလိုင်းရန့်တွေကိုထိန်းချုပ်လို့ရဖို့တဲ့။ ကျွန်တော့စက်ကို လည်း အဲဒီ Domain Server နဲ့ချိပ်ချင်တာပါ။ ကျွန်တော်နားမလည်လို့ပါ။ Website Domain မဟုတ်ပါဘူး။ DNS Server, Domain Server လုပ်နည်းအကြောင်း စာအုပ်လေးများရှိရင် မျှပေးပါဥိးခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်လေ့လာချင်လို့ပါ။ အကြောင်းအရာရေးတာ သေချာမရေးမိလို့ ဆောရီးပါဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
8 Re: Domain ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲ ? [Problem] on 23rd April 2011, 5:43 pm
ဒါဆိုလွယ်လွယ်လေးပဲဟာကို... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် အပေါ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်း
My computer ပေါ်မှာ Right Click နှိပ်ပြီးရင် Computer Name ဆိုတဲ့
Tab မှာ aအာက်ဆုံးက (To rename computer or Join domain)
စာကြောင်းနားက Change ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ပေါ်လာတဲ့
windows က Domain Name နေရာမှာ ကိုယ်လုပ်ပေးထားတဲ့ Domain
နာမည်ကို ရိုက်ထည့်ပြီးရင် OK တွေပဲနှိပ်သွားလိုက်ပါ။ Computer ကို
Restart ချလိုက်ပြီးတာနဲ့ Domain နဲ့က ကိုယ့်အတွက်ပေးထားတဲ့ Admin
ဒါမှမဟုတ် Username တွေနဲ့ ၀င်လိုက်ပါ။ ဒါဆို Domain ချိတ်ပြီးသွားပြီ
လွယ်လွယ်လေး ဟေး ဟေး....
9 Re: Domain ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲ ? [Problem] on 19th July 2011, 12:29 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2011-07-11
ကျွန်တော်လည်း Network သာတက်တာ ဘာမှ မတက်လိုက်ဘူး
ကို့ အကိုဆရာတွေ ပြောဆိုတာ လေးပဲ နားလည်အောင်ဖတ်တော့ မယ် ....ဟီး
10 Re: Domain ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲ ? [Problem] on 21st February 2012, 12:58 pm
ကျွန်တော်တို့တွေဖြစ်တတ်ပါတယ် လုံးဝမသိတာလည်းမဟုတ် သေသေချာချာလည်းမသိတော့ ကိုယ်မေးချင်တာသိချင်တာကို သေချာမမေးတတ်ကြပါဘူး။ တကယ်ဆိုရင် PDC (Primary Domain Controller) တခုဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် ADS (Active Directory Service), DNS (Domain Name System) စတာတွေ အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ပုံတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီဟာတွေ ဘာအတွက် ဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ မသိရင် PDC ကြီးကိုယ့်ရှေ့မှာရှိနေလဲ Administration လုပ်ဘို့လွယ်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Client စက်တွေ Domain user ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ အပေါ်က Moderatorကြီးပြောသလိုလုပ်လိုက်ရင်ရပေမယ့် ဘာကြောင့် client စက်တွေ PDC နဲ့ချိတ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေရှိပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် PDC တမျိုးတည်းထိုင်ထားတာဟာ User အလိုက် password တွေထိန်းသိမ်းမယ် ဖိုင် Print sharing နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ permission တွေထိန်းတာတွေလောက်ဘဲ အဓိကလုပ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Exchange (Email Server), Web Server တွေထောင်မယ်ဆိုရင် PDC ဟာ အတော်အရေးပါတဲ့(မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်) နေရာမှရှိနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့် Network Design တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် အလုပ်ရှင်ကဘာတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာ မေးမြန်းပြီးမှ Design လုပ်ကြရပြီး လုပ်ထားတဲ့ Network system တစ်ခုကို ထိန်းချုပ်မယ့်သူအနေနဲ့လဲ ကိုယ့်လုပ်ရမယ့် Network System ကိုကောင်းကောင်းနားလည်နေမှ အလုပ်ဖြစ်မှာပါ။ မြန်မာပြည်က အလုပ်ရှင်များကလည်း တတ်သိနားလည်သူများကို ပိုက်ဆံပေးရမှာစိုးရိမ်ပြီး ကိုးရိုးကားရားပုံစံတွေနဲ့ ဗျုတ်စဗျင်းတောင်းပြသနာတွေတန်းစီ Accountant ကို Network/system လုပ်တွေခိုင်းလိုခိုင်း Admin ကို ခိုင်းလိုခိုင်းနဲ့ဆိုတော့ ဒီလိုပါဘဲဗျာ။
11 Re: Domain ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲ ? [Problem]